Taxanaha albaabka saran ee ugu culus-furan oo fidiya Soo-saaraha iyo Warshadda | Dijing
Albaabkan sil-siladda culus leh wuxuu kuu abuurayaa nolol tayo leh, wuxuu ku siinayaa doorasho aan walwal lahayn, wuxuuna ku raaxaysanayaa nolol deggan oo habboon. Naqshadeynta qaab -dhismeedka aasaaska, shaqsiyad fudud oo xarrago leh, habayn macquul ah oo ku saabsan xogta qaab -dhismeedka gaarka ah, ku dadaal inaad siiso meel iftiin ku filan, u oggolow iftiinka jawiga dabiiciga ah inuu ku soo galo qaddar aad u badan, garwaaqsado goob ballaadhan oo aragti ah, yareeyo niyad -jabka, iyo hagaajinta cadnaanta iyo dhalaalka guud deegaanka qolka. Saamaynta muuqaalku waa mid fidsan. Xiridda dhalada galaaska, xidhitaanka xarigga xarig ee caagga ah, dahaarka dhawaaqa iyo dahaarka kulayl badan, gaarista saamaynta carrabka darajada baabuurta, si wax ku ool ah u xanniba gelitaanka buuqa dibadda, iyo siinta dadka deegaanka khibrad ka wanaagsan; saamaynta kuleylka kuleylku waa muhiim, heerkulka qolka waxaa lagu hayaa xadka ku habboon jirka aadanaha. , Yaree isticmaalka tamarta, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Teknolojiyadda dusha sare waa mid waarta oo ma baaba'do, teknolojiyadda horumarsanna waxaa loo adeegsadaa inay si wax ku ool ah u fidiso nolosha adeegga ee astaanta aluminiumka. Maqaarka matte waa mid casri ah oo fudud, oo leh dhoobada u eg dhoobada. Marka lagu daro mugga iyo miisaanka weyn ee albaabka siibanaya, biraha dhaadheer ee dhulka ku dhex jira ayaa si gaar ah loo habeeyay si kor loogu qaado bilicda guriga, loo fududeeyo nadiifinta loona yareeyo culayska shaqada guriga.
1. Bixi aragti buuxda oo jaleec ah, riix oo jiid bidix iyo midig si habboon, si aad u abuurto meel bannaan;
2. Maaddada nooca aluminiumku way adag tahay mana fududa in la dejiyo, adkaanta sare waxay diidaysaa saamaynta, qurux badan oo wax ku ool ah, nidaamsan, karti leh, xakameysan oo culus, hagaajinta heerka bilicsanaanta guriga, iyo u adeegidda qaabka cusub ee casriga ah oo fudud;
3. Waxqabadka shaabadaynta wanaagsan, isuduwaha aadka u xasilloon si loo go'doomiyo sawaxanka dibadda, tabinta kuleylka oo heerkiisu sareeyo, saamaynta dahaarka kulaylka oo aad u fiican;
4. Tijaabooyin badan oo riixitaan iyo jiidis ka dib, qodobka badbaadada ayaa sarreeya. Calaamaddu waxay bixisaa dammaanado badan oo loogu talagalay naqshadeynta tayada dhinac kasta. Albaabka simbiriirixan waxaa lagu qalabeeyaa jajabyo si looga hortago in dhinac-dhinac loo lulo oo loo leexdo;
5. Gacanta caadadu samaysay waa mid nadiif ah oo saliidaysan, waxay leedahay dareen ku habboon, mana fududa in la qanjiro oo way fududahay in la furo oo la xidho.
Hore: Albaabka Laaban